5 सर्वश्रेष्ठ स्थानीय मिठाई युरोप मा प्रयास गर्नुहोस् लागि | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ स्थानीय मिठाई युरोप मा प्रयास गर्नुहोस् लागि
स्थानीय मिठाई धेरै किसिमहरु मा आउन सबै युरोप भन्दा. हरेक देश र क्षेत्र यसको आफ्नै सानो व्यवहार छ तिनीहरूले प्रस्ताव मा गर्व. एक मिठाई दाँत संग पर्यटकहरुका लागि, त्यहाँ नयाँ स्वाद भन्दा यात्रा बारे केही थप alluring छ. यहाँ हाम्रो शीर्ष छन्5युरोप मा प्रयास गर्न सबै भन्दा राम्रो स्थानीय मिठाई.
1. एक स्थानीय मीठा – Mozartkugel, सल्जबर्ग, अस्ट्रिया
एक को सर्वाधिक लोकप्रिय र युरोप मा प्रसिद्ध स्थानीय मिठाई छ Mozartkugel. हामी थाहा, पावलले Furst पहिले एक सताब्दी भन्दा सल्जबर्ग मा मूल नुस्खा सिर्जना. यो एक स्तरित छ चकलेट व्यवहार हरियो पिस्ता र नूगा संग.
त्यहाँ धेरै औद्योगिक बनाएको बजेट संस्करणहरु छन्, र तपाईं सुपरमार्केट तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ. तथापि, मूल संस्करण छैन धेरै महँगो, र यो मूल्य मा फरक लायक छ. कुल मिलाएर, तिनीहरूले आफ्नो अष्ट्रीया यात्रा घर ल्याउन सबै भन्दा राम्रो स्थानीय मिठाई को एक हो.
Passau गर्न सल्जबर्ग
2. एक स्थानीय मीठा – डोनटहरू, बर्लिन, जर्मनी
तपाईंले यो स्थानीय मीठा को नाम भन्न एक गाँठ मा आफ्नो जिब्रो बाँध छैन. मान्छे बर्लिन बाहिर बर्लिनर तिनीहरूलाई छोटो, र बर्लिन प्यानकेकहरू. अमेरिकी डोनटहरू विपरीत, तिनीहरूले केन्द्रमा एक प्वाल छैन. जब तपाईं परम्परागत नुस्खा पालना, तपाईं मिठास एक स्वादिष्ट बल प्राप्त, जाम वा मुरब्बा भरिएको, चिनी Icing संग.
3. stroopwafel, एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
stroopwafel एक युरोप मा पाउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा लत स्थानीय मिठाई को छ. धेरै अन्य मिठाई विपरीत, त्यहाँ नुस्खा उत्पत्ति गर्ने र कहाँ कुनै बहस छ. Gouda को डच शहर मा Bakers पहिलो तिनीहरूलाई गरे. तिनीहरूले प्याक र राम्रो यात्रा किनभने, तिनीहरूले उत्कृष्ट स्मृति चिन्ह बनाउन.
दुई पातलो वेफर्स एक कर्मेल "गोंद" एक Stroopwafel बनाउन साथ सँगै ल्याए. यसलाई विशेष ध्वनि छैन हुनत, विश्वव्यापी अपील तिनीहरूलाई सबै भन्दा राम्रो स्थानीय मिठाई को एक बनाउँछ. यी मिठाई बनाउन एक सिद्ध खाजा एक लामो दिन पछि रेल-hopping, किनमेल, र Cyclist dodging - सबै विशिष्ट एम्स्टर्डम गतिविधिहरु.
4. डेनिस आँटा, कोपेनहेगन, डेनमार्क
तापनि डेनमार्क सानो छ, यसको सबै भन्दा राम्रो स्थानीय मिठाई को दन्त्यकथा टाढा र व्यापक यात्रा. डेनिस केक अष्ट्रीया Bakers को एक समूह संग डेनमार्क गर्न यात्रा. को पाठ्यक्रम, तिनीहरूले वर्ष अधिक नुस्खा परिमार्जन, र धेरै स्कैंडिनेवियाई आप्रवासी अमेरिका यसलाई ल्याए. तथापि, तपाईं जहाँ समर्पित Bakers यो सिद्ध देश मा सबै भन्दा पाउनेछन्.
यो स्थानीय डेनिस मीठो तपाईं स्वाद हुनेछ lightest कुराहरू एउटै हो. को Bakers जाम यसलाई बन्द माथि, पनीर, वा उत्तम स्कैंडिनेवियाई फ्लेयर Infuse गर्न क्रीम. हुनत यो छ स्वाद र क्यालोरी मा धनी, कोपेनहेगन अन्वेषण को एक दिन पछि हिउमा, तपाईं पाउनेछन् यी गुणहरू दुवै.
5. Cuberdon, बेल्जियम
Cuberdon युरोप मा सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा अस्पष्ट स्थानीय मिठाई को छ. यो टोपी आकारको छ, अक्सर बैजनी, र रास्पबेरी भरिएको भरिएको. जब तपाईं एक मा दु: ख, तपाईंको दाँत सजिलो संग भर्नु नरम मध्य मा डुब्नु. तिनीहरू यसलाई प्रायः बेल्जियम भनिन्छ उत्तम राखिएको गोप्य. गाह्रो छ किनभने केही हप्ता पछि यो संरक्षण गर्न, तिनीहरू प्रायः यसलाई निर्यात गर्दैनन्. तथापि, केहि अद्वितीय प्रयास गर्न र यसलाई घर ल्याउन चाहने एक पर्यटक को लागि, को cuberdon सिद्ध छ.
तपाईं आफ्नो जीवन मा केही चिनी र मसला थप्न चाहनुहुन्छ र एक रेल चड्नुहुन्छ खाना भ्रमण युरोप मार्फत? आज तपाईंको टिकट बुक!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 सर्वश्रेष्ठ स्थानीय मिठाई युरोप मा प्रयास गर्नुहोस् लागि” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-local-sweets-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#डेनमार्क #sweets चकलेट eurotrip travelaustria ट्राभेलबिजियम travelgermany travelnetherlands
द अंग्रेजी प्रिमियर लिग ट्रेन द्वारा घुम्दै